युद्ध कला कुनै पनि राज्य सदियों गठन गरेको विशेष परम्परा भरिएको छ। युद्ध ज्याला गर्ने क्षमता संसारको इतिहासमा धेरै देशहरूमा लागि सुन्दर प्रसिद्ध छ, तर केवल तिनीहरूलाई केही आधुनिक समयमा प्राचीन परम्परा संरक्षित छन्। अभ्यास आफ्नो सैनिक लागि युद्ध एक जन्मबाट प्राप्त अन्त किनभने यस्तो राज्य, सबै भन्दा लडाई-तयार हुनुहुन्छ भनेर देखाउँछ। यी देशहरूमा केही दुई पटक सारा संसार विरुद्ध युद्ध लडे छ जो स्विट्जरल्याण्ड, यसको mercenaries लागि प्रसिद्ध, जर्मनी, संयुक्त राज्य, यसको सबै भन्दा राम्रो नाभिकहरु संग, साथै स्पेन, जसको पैदल सारा संसार थाह समावेश गर्नुहोस्। तर संसारको इतिहास त्यहाँ जसको सेना माथिको भन्दा कुनै खराब छ अर्को देश, छ। यो राज्य बारम्बार चीन, रूस संग युद्ध नेतृत्व छ, र पनि द्वितीय विश्व युद्ध मा एक महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका। तसर्थ, लेख संरचना, आकार, इतिहास र जापान सरकार सेना को अन्य सुविधाहरू मा छलफल गरिनेछ।
शाही सेना - जापान आधुनिक विमान स्रोत
आधुनिक जापानी सेना - यसको ruthlessness, बल र शक्ति लागि विश्वव्यापी ज्ञात थियो जो एक पटक अवस्थित सेना, एक ऐतिहासिक गुन्जन। तथापि, जापानी सेना सिर्जना सुधार को एक श्रृंखला preceded थियो। सुरुमा एक सैन्य गठन जापान थियो। देशको रक्षा को आधार विशिष्ट सामुराई मिलिशिया, वस्तुतः नियन्त्रण गर्न प्रतिक्रिया देखाए जो थिए। तर 1871 द्वारा, देश देखिन्छ इम्पेरियल जापानी सेना। सैन्य को गठन को आधार व्यक्तिगत सेना धेरै प्रधानहरू (Choshu, Tosa, Satsuma) सेवा गरे। मुख्य नियामक शरीर सेना र नौसेना मंत्रालय थिए। केही वर्ष भित्र इम्पेरियल सेना बारम्बार रूसी साम्राज्य, चीन र ब्रिटिश colonies संग लडाई मा आफ्नो बल प्रदर्शन गरेको छ जो एक formidable शक्ति, भयो। तर जापानी शाही सेना को इतिहास देश नाजी जर्मनी र तानाशाह इटाली एउटा सम्बन्ध मा प्रवेश गर्दा छाप थियो।
1945 मा, जापान द्वितीय विश्व युद्ध मा पराजित भएको थियो। संयुक्त राज्य अमेरिका को कब्जा सेना शाही सेना dismantled, र मध्य-1947 द्वारा, बिल्कुल सबै सैन्य विद्यालय बन्द थिए, परम्परागत मार्शल आर्ट कक्षाहरू प्रतिबन्धित। यो क्षण देखि राज्य जापान संयुक्त राज्य अमेरिका को पूर्ण नियन्त्रणमा छ। 1951 मा पहिले नै, अमेरिकी अधिकारीहरूले यसको राख्न अनुमति सैन्य आधारमा जापान। कि पछि, राज्य बिस्तारै राष्ट्रिय रक्षा को सिद्धान्त को आधारमा केवल हुन्थे जो आफ्नो सशस्त्र सेना, विकास गर्न थाल्छ। यसरी, जापान, त्यहाँ आत्म-रक्षा सेना हो। को XXI सताब्दी को शुरुवात गरेर, यी शक्तिहरू एक पेशेवर सैनिक शक्ति भएको सशस्त्र सेना को स्थिति को योग्य भएका छन्। एकै समयमा राज्य इलाका बाहिर जापानी सशस्त्र सेना प्रयोग मा प्रतिबंध हटाइयो। मिति, जापानको आत्म-रक्षा - एक पेशेवर सेना, यसको आफ्नै संरचना र कार्य को स्पष्ट सूची छ जो। सेना को आकार 247 हजार मान्छे छ।
जापानी सशस्त्र सेना धेरै अवशोषित गरेको सिद्धान्तहरू आधारमा अभिनय गर्दै नैतिक मान्यता र राजनीतिक धार्मिक शिक्षाले। त्यहाँ आधारभूत सिद्धान्तहरू पाँच मात्र हो:
आक्रमण को 1 अस्वीकृत। यो सरकार अन्य राज्य को प्रादेशिक निष्ठाको प्रत्यक्ष आक्रमण, उल्लङ्घनको यसको सेना प्रयोग गर्ने छैन भन्ने हो।
आणविक हतियार प्रयोग गर्न2विफलता।
जापानको आत्म-रक्षा गतिविधिहरूको 3. हर एक ठाँउ लगातार नियन्त्रण।
संयुक्त राज्य अमेरिका संग4सैन्य सहयोग। द्वितीय विश्व युद्ध पछि, जापान नाटो बाहिर सबै भन्दा ठूलो अमेरिकी सैन्य सहयोगी हो।
सिद्धान्तहरू निम्न सूची जापान आफ्नो सैन्य गतिविधिमा पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न खोज्ने रूपमा, exhaustive छैन।
कानुनी स्थिति को अस्पष्टता
यो जापानी सेना एक अस्पष्ट कानुनी स्थिति छ उल्लेख गर्नुपर्छ। जापानको संविधान आधारभूत व्यवस्थाको लेख9मा enshrined छ जो राज्य, इलाका मा कुनै पनि सैन्य formations सिर्जना नगर्नू। बारी मा, आत्म-रक्षा - एक नागरिक गठन, अर्को शब्दमा, एक सैन्य एक। तर, विद्यमान विश्व देशहरूको कुनै पनि बलियो, व्यावसायिक सेना बिना गर्न सक्नुहुन्न। यो अर्थमा जापान कुनै अपवाद छ। तर एकदम को प्रयोगको लागि कानुनी आधार को कमी गतिविधिहरु को स्कोप प्रतिबन्ध र जहाँ तपाईं जापान को सशस्त्र सेना वा आत्म-रक्षा बलहरु प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
सेल्फ-रक्षा बलहरु को संरचना
अन्य देशहरूको सेनाले एक बराबरीको मा, जापान सेना अब चार आधारभूत तत्व को एक मानक संरचना छ। यस्तै निर्माण सशस्त्र सेना व्यक्तिगत तत्व बीच परिचालन अन्तरक्रिया कारण को सुख। कि बनाउन जापानी सेना, अर्थात् निम्न संरचनात्मक तत्वहरू:
- मैदान सेना आत्म-सुरक्षाको।
- आत्म-सुरक्षाको नौसेना सेना।
- एयर स्व-रक्षा बल।
सशस्त्र सेना को चौथो आधारभूत तत्व एक विशेष सेवा हो। तिनीहरूले आफ्नै वर्गीकरणका र जटिल आन्तरिक संरचना छ देखि सामान्यतया प्रणाली को एक अलग एकाइ रूपमा, प्रतिष्ठित छन्।
भूमि र हावा आत्म-रक्षा सेना
को शाही सेना दोस्रो विश्व युद्ध को समयमा धेरै प्रभावकारी थिए जो आफ्नो सैन्य-हावा सेना, को लागि प्रसिद्ध थियो। आज जापान को एयर स्व-रक्षा बल को शाही सेना को परम्परा लियो, तर उनि धेरै अलग लक्ष्य छ। उड्डयन राज्य को airspace, साथै जापान मा एक प्रत्यक्ष आक्रमण को मामला मा शत्रु हावा सेना विनाश रक्षा गर्न डिजाइन गरिएको छ। देश सैन्य वायु सेना भित्र एक शक्तिशाली हावा प्रविधी र धेरै संरचनात्मक एकाइहरु possesses। जमीन स्व-रक्षा जापान बल पर्याप्त राज्य सेना संरचना मा एक Motorized ड्रम डिभिजनका सिर्जना गर्न निषेध गरिएको छ किनभने "कटौती"। तर, यी सेना तोप, पैदल, ट्यांक र हेलिकप्टर डिभिजनका पूर्णतया छन् जापानको रक्षा प्रदान छ। अपनाउने जापानी सेना भारी र प्रकाश ट्यांक, Armored वाहन (IFV), Armored वाहन, तोप टुक्रा को एक ठूलो संख्या भूमि, विभिन्न देशहरूको उत्पादन मोर्टार।
जापान समुद्री स्व-रक्षा बल
राज्य धेरै टापुहरू मा स्थित छ किनभने नौसेना सेना, जापान को क्षेत्र सुरक्षा गर्न मुख्य बाटो हो। यो सशस्त्र सबैभन्दा कुशल भाग हो। धेरै वैज्ञानिकहरू बराबर समुद्र युद्ध अन्तर्गत रूपमा संयुक्त राज्य अमेरिका नौसेना संग जापान स्व-रक्षा बलहरु को समुद्र तुलना। दोस्रो Yokosuka, Sasebo पहिलो, Chur मा Maizuru मा तेस्रो, चौथो: जापानी नौसेना चार मुख्य जंगी जहाजको टोली, जापान विभिन्न भागहरु मा आधारित छन् जो हुन्छन्। तर एक drawback नौसेना छ - समुद्री कोर अनुपस्थित छ। यो वास्तवमा कारण जापानी सेनाले लागि आधार छ गैर-आक्रमण, को सिद्धान्त छ। राज्य बस गर्न अनुमति दिएको छ किनभने छैन समुद्री कोर अवस्थित छैन। destroyers, destroyers, विमान वाहक र विभिन्न वर्ग र स्तर को पनडुब्बी जहाजहरू को एक ठूलो संख्या को नौसेना सेना को भाग रूपमा। साथै, छिटो धेरै समर्थन जहाज र अस्थायी आधारमा छ।
विशेष सेवाहरू छुट्टै समूह विभाग एकल तत्व जापान रवि संरचना गठन जो विनियोजन छन्। ती सबै आफ्नै छ नियामक रूपरेखा, साथै विशिष्ट कार्यात्मक कार्यहरू एक नम्बर। यी सेवाहरूको केही समावेश:
- सूचना र अनुसन्धान ब्यूरो (सेवा गतिविधि छैन ठीक किनभने कर्मचारीहरु को सानो संख्या र गुप्ति को एक ठूलो डिग्री स्पष्ट छ)।
- सेना बुद्धि सेवा (को शाही सेना खुफिया को उपलब्धिहरू आधारित छ जो, र धेरै हदसम्म संयुक्त राज्य अमेरिका खुफिया को अनुभव अपनाए)।
- सूचना व्यवस्थापन र अनुसन्धान।
- प्रहरी मुख्यालय (सार्वजनिक सुरक्षा को मुख्य शरीर)।
- सेना प्रतिरोधक (जापान को मुख्य प्रतिरोधक एजेन्सी)।
साथै, निरन्तर जापान सामाजिक र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकास नयाँ सेवाहरू सिर्जना छ।
साथै जापान मा सेना को आकार हरेक वर्ष बढ्दै छ कि उल्लेख गर्नुपर्छ। साथै, बढ्छ र सरकारले सैन्य मा बिताउनुहुन्छ कि धन को राशि। यसरी, मिति गर्न, जापानको आत्म-रक्षा - यो संसारमा सबै भन्दा व्यावसायिक र खतरनाक सशस्त्र समूहका एक, र पनि तटस्थ स्थिति छ।
झण्डा र कुर्स्क क्षेत्र को काखमा को कोट: इतिहास र अर्थ
Maneuvering आवास स्टक - आवास maneuverable कोष ... जहाँ यो अचल सम्पत्ति लगानीकर्ताले धोखा?
Indulgirovat - यो शाब्दिक अर्थ: सोचाइ बारेमा सोच
कति एउटा स्याउ मा क्यालोरी, तर रूख हटाइयो?
तपाईँको कम्प्युटरमा र नेटवर्कमा पासवर्ड भण्डारण
Elena Polyakova (अभिनेत्री): जीवनी, काम र परिवार
किन नातेदार को सपना। सपना व्याख्या: मृत नातेदार को सपना